नेपाल आज | कोरोना भाइरस अपडेट : विश्वभर १ लाख ७७ हजार बढीको मृत्यु, कति पुगे संक्रमित ?
कोरोना भाइरस अपडेट : विश्वभर १ लाख ७७ हजार बढीको मृत्यु, कति पुगे संक्रमित ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ७७ हजार ६०८ जनाको मृत्यु भएको छ । मंगलबार एकैदिन ७ हजार ६२ जनाको मृत्यु भएसँगै विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख ७७ हजार ६०८ पुगेको हो ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म एकैदिन विश्वभर ७५ हजार २४५ जना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै कूल संक्रमितको संख्या २५ लाख ५६ हजार ५१२ पुगेको छ । अमेरिकामा मात्रै मृत्यु हुने मानिसको संख्या ४५ हजार नाघेको छ । अमेरिकामा थप २ हजार ८०४ जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४५ हजार ३१८ पुगेको हो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ २५ हजार ९८५ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै संक्रमित हुने मानिसको संख्या ८ लाख १८ हजार ७७४ पुगेको छ । अमेरिकामा संक्रमितमध्ये ८२ हजार ९२३ जना उपचारपछि निको भएका छन् । उपचार गराइरहेका ६ लाख ९० हजार ५०३ जनामध्ये १४ हजार १६ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीले इटालीमा एकै दिन ५३४ जनाको मृत्यु भएको छ । मंगलबार थप ५३४ जनाको मृत्यु भएपछि इटालीमा मृतकको संख्या २४ हजार ६४८ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ २ हजार ७२९ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै संक्रमित हुने मानिसको संख्या १ लाख ८३ हजार ९५७ पुगेको छ ।
इटालीमा संक्रमितमध्ये ५१ हजार ६०० जना उपचारपछि निको भएका छन् । उपचार गराइरहेका १ लाख ७ हजार ७०९ जनामध्ये २ हजार ४७१ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको इटालीका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले जनाएका छन् । स्पेनमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरसले ४३० जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ हजार ९६८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
योसँगै कोरोना भाइरसको महामारीबाट स्पेनमा मृत्यु हुनेको संख्या २१ हजार २८२ पुगेको छ । त्यहाँ २ लाख ४ हजार १७८ जना संक्रमित भएका छन् । संक्रमितमध्ये ८२ हजार ५१४ जना उपचारपछि निको भएका छन् । उपचार गराइरहेका १ लाख ३८२ जनामध्ये ७ हजार ७०५ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको स्पेनका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
यस्तै फ्रान्समा २० हजार ७९६ जनाको मृत्यु भएको छ भने बेलायतमा १७ हजार ३३७ जनाको मृत्यु भएको छ । कोरोना भाइरस सुरुवात भएको मुलुक चीनमा ३० जना नयाँ संक्रमित देखिए पनि पछिल्लो २४ घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन । त्यहाँ ४ हजार ६३२ जनाको कोरोना भाइरसले मृत्यु भइसकेको छ ।